Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Edmonton oo shir ay ku doorteen maamul cusub isugu yimid
Jaaliyadda Edmonton oo shir ay ku doorteen maamul cusub isugu yimid
Waxaa shir aad u balaadhan isugu yimid hawlwadeenada jaaliyada magaalada Edmonton kaas oo lagaga arinsanayey sidii loo dooran lahaa maamul cusub oo badala maamulkii hore ee jaaliyada soo hogaaminaayey sanadkii hore 2012.
Waxaa shirka Lagu furay ayaadaha quraanka kariimka ah oo uu soo jeediyey Sh. Maxamed macalin ilaahay ha ka ajirsiiyo inagana ha inagu anfaco. Ka dib; Gudoomiyhii hore ee jaaliyada magaalada edmonton halgame Cumar Xirsi ayaa soo jeediyey hadal aad u qiimo badan isagoo ka warbixiyey sanadkii uu xilka hayey hawshii adkeyd ee ay ka soo gudbeen taasoo ahayd mid midho dhal ah inagoo buu yidhi maanta si xor ah u doorano maamul cusub oo ina hogaamiya. Wuxuu aad ugu mahadceliyey dhamaan jaaliyada S.Ogaadeeniya ee birlabta ah ee aan marnaba ka daalaynin halganka iyo hawlwadeenada waqtigoodii qaaliga ahaa galiyey in ay jaaliyada ka soo saaraan marxaladihii qalafsanaa ee gumaysi kalkaalka uu mar walba kala hor imanayey.
Waxaa shirka hagayey gudoomiyaha gudiga farsamada halgame C/ xakiim M. wali, wuxuuna sharaxaad dheer ka bixiyey sida ay doorashadu u dhacayso isagoo raacaya xeer hoosaadka u yaala jaaliyada kaas oo waafaqsan xeerka JWXO .
Waxaa shirka dhinaca khadka taleefanka kaga soo qayb gashay halganto Taajiro Cali Hilowle oo joogtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo xubin ka ah jaaliyada Bariga Afrika, waxayna halkaa ka tirisay tix gabay ah oo lamagac baxay “Gadood” kaas oo taabanaayey dhinacyo badan oo ku saabsanaa waqtigii uu bilaabmay halganka gobonimodoonka ah ee JWXO ay hormuudka u tahay laguna xoraynayo dalka Ogaadeeniya ilaa iyo maanta heerka uu marayo.
Gudoomiyaha farsamadu wuxuu bilaabay in la qaado cod kaas oo ku yimid fartaag wuxuuna u dhacay sidan oo ay jaaliyada magaalada Edmonton ku yeelatay maamul cusub waxaana ku guulaystay gudiga jaaliyada shakhsiyaadkan hoos ku qoran:
Gudoomiyaha jaaliyada magaalada Edmonton; halgame Ismaaciil C/laahi xuseen. Hogaanka abaabulka iyo arimaha bulshada halgame Maxamed Adan Dubad(abshir). Xoghayta jaaliyada Edmonton halgame C/raxmaan Maxamed. Hogaanka warfaafinta C/Nasir Galaal. Hogaanka Arimaha Dabagalka , Anshaxa iyo Diinta halgame C/ xakiim M wali.
Halgame Cabdi raage Cali Xubin. Halgame Shukri C/ laahi Rabi. Xubin.
Waxaa madasha shirka Lagu soo dhaweeyey isuduwaha jaaliyadaha Canada mudane Yusuf Ismaaciil wuxuuna aad ugu mahadceliyey gudigii farsamada sida wanaagsan ee ay u guteen waajibaadkii saarnaa iyo sida fiican ee loo doortay maamul tayo iyo karti leh. Wuxuu kaloo aad ugu amaanay maamulkii hore hawshii adkeyd ee ay u soo qabteen jaaliyada iyo doorkii hormoodnimo ee ay ku lahaayeen jaaliyadaha Canada. Wuxuu sidoo kale soo dhaweeyey maamulkan cusub in xilka maanta ay qaadeen uu ilaahay u fududeeyo, isagoo kula dardaarmay dhamaan xubnaha jaaliyadu in ay si buuxda ula shaqeeyaan maamulkan.
Waxaa shirka tix buraanbur ah ka tirisay gabadh kamid ah gabdhaha S.gaadeeniya oo ah gabadh ku caan baxday halganka aadna looga yaqaano magaalada Edmonton. Halganto Shukri C/laahi Raabi oo waqti walbana u taagan in ay ka qayb qaadato halganka lagu raadinaayo aayo ka talinta shacbiga dulman ee gumaysiga ku hoos jira waxay u bixisay tixdan Calanka S.Ogadenya. waxaa ka mid ahaa buraamburkaa;
– Calankeena carafta badan
– Casaan iyo cagaar buluug iyo
– Xidig lagu cabiray
– Goor dhaw buu cagaha dhigan
– Cobale iyo Goday
– Cutubyadii Jwxo iyo
– Shacabkoo caleemo luli
– Ee allow noo calaf wuu na caawiyee
Ugu dambayntii waxaa Lagu soo dhaweeyey gudoomiyaha cusub ee loo doortay jaaliyada magaalada Edmonton mudane Ismaaciil C/laahi Xuseen wuxuuna halkaa ka soo jeediyey hadal kooban oo macna weyn xambaarsan isagoo ku booriyey hawlwadeenada in ay ilaaliyaan midnmada shacabka S.Ogaadeeniya meelna uga soo wada jeedsadaan sidii loo dardargalin lahaa geedi socodka halganka gobonimodoonka ah.
Shirkii hawlwadeenada jaaliyada magaalada Edmonton wuxuu ku soo dhamaaday jawi farxadeed